Xog Dheeraad Ah Oo Laga Helayo Dil Loo Geystay Injineer Falastiini Ah. – Bogga Calamada.com
Xog Dheeraad Ah Oo Laga Helayo Dil Loo Geystay Injineer Falastiini Ah.
Taliyaha ciidamada Police-ka magaalada Kuala Lampur ee caasimada dalka Malaysia ayaa sheegay in dilka Injineerkii Filistiiniga ahaa ee maalintii shaley lagu dilay magaaladaas uu ahaa qadiyad caalami ah, isagoona tilmaamay in ay wadaan baaritaano xoogan oo lagu dabagalayo kiiskaasi.
Fadi Maxamed Al-Badhas oo ahaa xubin ka tirsan kooxda Xamaas ayaa aroornimadii hore ee shaley lagu dilay meel u dhow magaalada Kuala Lampur ka dib markii laba ruux oo watay mootooyin ay dhowr xabadood oo bastoolado ah kaga dhufteen qeybaha sare ee jirka.
“Waxaan wadnaa baaritaano xoogan oo aan ku dabagaleyno dhacdadan, waxaana arinta ka eegeynaa jihooyin kala duwan. waa inaan dhacdadan u dabagalnaa si taxadar leh oo qoto dheer, tani waa qadiyad caalami ah oo ay ku lug leeyihiin gacmo shisheeye” ayuu yiri Mazlan Lazim oo ah taliyaha Police-ka Kuala Lambur.
Xarakada Xamaas oo soo saartay war-saxaafadeed ay kaga hadleyso dilkan ayaa sheegtay in Al-Badhash uu ahaa xubin firfircoon oo ka tirsan ururkooda, Iyadoona xustay in dilkiisa ay ka dambeyso hay’adda sirdoonka Mossad ee ay Yahuuddu leedahay.
Ismaaciil Haniyah, hogaamiyaha kooxda Xamaas ayaa isna wakaaladaha wararka u sheegay in faraha tuhmadda aysan ka fogeyn Mossadka Yahuudda.
Qoyska uu ka dhashay Fadi Al-Badhash ayaa iyagana dhankooda arintan ku eedeeyey sirdoonka Yahuudda, Iyagoona tilmaamay in wiilkooda uu ahaa xubin ka tirsan kooxaha Filistiiniyiinta ee dagaalka kula jira maamulka Yahuudda ee xoogga ku heysta dhulka Filastiin.
Aabaha Dhalay Injineerka ayaa isagana wareysi uu siiyey TV-ga AlJazeera kaga dalbaday dowladda Malaysia in ay sameyso baaritaano lagu dabagalayo dilka loo geystay wiilkiisa.
Axmad Zaahid Xamidi oo ah Ra’isul wazaare ku xigeenka dalka Malaysia ayaa sheegay in ragga looga shakisan yahay weerarka la rumeysan yahay in ay ka soo jeedaan Qaarada Yurub, ayna ku xiran yihiin hay’ad sirdoon oo shisheeye.
Bishii December ee sanadkii 2017, Khabiir Filistiini ah oo farsameeya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, laguna magacaabijiray Maxamed Sawari ayaa lagu dilay dalka Tunis ka dib markii kooxo hubeysan ay ku toogteen meel u dhow guri uu daganaa, Waxaana dilkaas ka dambeeyey sirdoonka Yahuuda.